ဆိုင်မွန်(နည်းပညာ): iPhone အတွက် ထုတ်ပေး လိုက်တဲ့ Microsoft ရဲ့ Meeting Schedule Application
တီထွင်ဖန်တီးမှုသတင်း၊ နည်းပညာသတင်း၊ ဆော့ဝဲများ မျှဝေခြင်း
ဤဘလောဂ့်ဆိုဒ်သည် ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်၏ ပရိတ်သတ်များ တက်ရောက် ဖတ်ရှုခြင်း လွယ်ကူမြန်ဆန် စေရန် ရည်ရွယ်၍ ထပ်မံတိုးထားသော ဆိုဒ်ပွား တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါသည်။
iPhone အတွက် ထုတ်ပေး လိုက်တဲ့ Microsoft ရဲ့ Meeting Schedule Application
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက် အနည်းငယ် အတွင်းက iPhone အသုံးပြု သူတွေ အတွက် အံ့သြအောင် Microsoft မှ Application တစ်ခုကို မိတ်ဆက် ပေးခဲ့ ပါတယ်။ အဆိုပါ Application ကတော့ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေ သူတွေ အတွက် ရည်ရွယ် ပြီး ထုတ်လုပ် ထားတဲ့ Application ဖြစ်ပါတယ်။
ရုံးလုပ်ငန်းသော် လည်းကောင်း၊ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းသော် လည်းကောင်း လုပ်ကိုင်နေ သူတွေဟာ အနည်း အများတော့ အစည်းအဝေးတွေ ရှိကြ ပါတယ်။ အစည်းဝေး ရှိတဲ့ အခါ မိမိရဲ့ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်တွေကို အစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားဖို့ အတွက် Application တစ်ခု အသုံးပြုရုံနဲ့ အဆင်ပြေ စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Application ရဲ့ အမည်ကိုတော့ Invite လို့ အမည်ပေး ထားပါတယ်။
မိမိဟာ အစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားခြင်းများ အတွက် Invite ကို အသုံးပြုကာ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်များ ဆီသို့ ဖိတ်ကြားနိုင်တဲ့ အပြင် အစည်းဝေး ဖိတ်ကြားခံရတဲ့ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက် များအနေနဲ့ အဆိုပါ Application ကို မိမိ ဖုန်းအတွင်းသို့ install လုပ်စရာ မလိုပဲ လက်ခံနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မိမိ Email တစ်ခုခုရဲ့ Calendar ထဲကို invite လုပ်စရာ မလိုပဲ အစည်း အဝေး ဖိတ်ကြား ချက်တွေကို လက်ခံနိုင် ပါသေးတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ Microsoft Invite ရဲ့ Feature ဟာ Website Version နဲ့ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်နိုင် လို့ပါပဲ။
Microsoft Invite Application ဟာ iPhone တစ်မျိုး တည်းမှာသာ အသုံးပြုနိုင် သေးတဲ့ Application ဖြစ်တဲ့ အပြင် Window နဲ့ Android အတွက်တော့ လုပ်ဆောင် နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
iPhone မှာ အသုံးပြု လိုပါက App Store မှာ Download ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Application ကို အသုံးပြုတဲ့ အခါ Microsoft Office 365 ရဲ့ Account သို့မဟုတ် Microsoft Invite ရဲ့ Accoount တို့နဲ့ အသုံးပြုမှသာ အဆင်ပြေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Ref : Mashable
Aung Ko Htet (MMA)
Original link - http://www.myanmarmobileapp.com/
Posted by Te Tee at 12:03:00 AM
USB debugging on & Off ဆိုတာ
[Zenfone 2] How to Enter Recovery, Wipe Data, Wipe...
Samsung Galaxy ဖုန်းတွေ Recovery Mode ၀င်နည်း
Samsung ဖုန်းများ အတွက် Full File FIrmware ( Repai...
iPhone 5s iOS 9.0.2 ကို Jailbreak လုပ်နည်း
ဒေါင်းလော့ဆိုဒ်မျိုးစုံမှ လွယ်ကူစွာ ဒေါင်းယူနည်းမျ...
Computer ကနေ Google Play Store မှ Application တွေက...
Blogger တွင် ZawGyi နှင့် Unicode Font များကို Emb...
Factory reset အလွယ်တကူ ချယူ နည်းများ
Vice President 1
U Myint Swe
Vice President 2
အဝလွန်သော သက်ကြီး ဆီးချို ဝေဒနာရှင်တွေ အချိန်မတိုင်မှီ သေဆုံးနိုင်ခြေ လျော့ကျ
The Speaker News Journal Vol 1 No 34
ရင်ဘတ် ၂ ခု၊ လက် ၄ ဘက်၊ ခြေ ၄ ချောင်းဖြင့် ထိတ်လန့်ဖွယ် မွေးဖွားလာသည့် မိန်းကလေး
မန်စီးတီး ဂိုးသမား ဂျိုးဟတ် ဝက်စ်ဟမ်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် နီးစပ်
Mizzima Burma News 27 June 2017
ဗွီဒီယို - မြူဇစ်
Free Antivirus For U
Kenbo Firmware Collection
X-BO Firmware Collection
Miracle Box Crack V2.14
ဖုန်းအဟောင်း တစ်လုံးကို အိမ်လုံခြုံရေး ကင်မရာ အဖြစ် ပြောင်းလဲနည်း
Samsung FRP Lock
စက္ကူ မီးပုံး ကလေးတွေ ကိုယ်တိုင် ခေါက်ကြည့်မလား
စမတ်ဖုန်းတွေမှာ ကင်မရာနှစ်ခု ပါဝင်ခြင်းက တစ်ခုတည်း ဖြစ်ခြင်းထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ရသည့် အကြောင်းရင်း (၆) ခု
How To Root Samsung Galaxy A5 Lolipop 5.0.2 and Download All Version
အခမဲ့ ဝင်ဒိုး ၁၀ ကီး (သို့မဟုတ်) အမှတ်စဉ်သော့ချက်များ
✿ ဝင်းဒိုးတင်ပြီတိုင်းမှာ အင်စတော့ ပြုလုပ်ရမည့် -PC Software all Installer 2017 Full [555 MB] ✿
FaceBook ကို လိုက်ခဲ့ပါလား
မြန်မာပြည်တွင်း Android Phone User များအတွက် Easy Top Up
မင်္ဂလာပါ မိတ်ဆွေ... မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ များ၏ ဝန်ဆောင်မှု များကို Application တစ်ခုထဲမှ လွယ်ကူ လျင်မြန်စွာ ရယူ သုံးစွဲနို...
အောက်ပါခေါင်းစဉ်များထဲမှ သင်နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ် ဖတ်ရှု နိုင်ပါသည်။
တီထွင်ဖန်တီးမှုသတင်း Tutorial နည်းပညာသတင်း Android-APK Firmware အသစ်ထုတ်လုပ်မှုများ Android အသစ်ထုတ်ဖုန်းသတင်း facebook-news Window-guide မိုဘိုင်းဖုန်းသတင်းများ Samsung-Galaxy PC-Software facebook-guide ပန်းသီးသတင်း Guide Download Root Huawei Google-News အော်ပရေတာ Myanmar-Font ရုပ်/သံ ဆက်သွယ်ရေးသတင်း Anti-virus Android-Game IOS Smartphone-guide နည်းပညာဗဟုသုတများ မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးချနည်း အင်တာနက်သတင်း Google Sony Windows10 iPhone တီထွင်ဖန်တီးရှင်များ နည်းပညာဆောင်းပါး LG စမတ်ဖုန်းအကြောင်း အသစ်ထုတ်စမတ်နာရီ Android-tool Browser Google-guide Microsoft အသစ်ထုတ်-Tablet-သတင်း နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင် Cleaner DriverUpdater Internet-security Smartphone-News Speedup Xiaomi အသစ်အဆန်း နိုင်ငံတကာဟက်ကာများ Error-Fix HTC NetGuide PhotoShop Samsung Tool Web Window-tool iPad security စမတ်ဖုန်း နည်းလမ်းများ Activetor Android-Phone-Connector Android-Player Dictionary Firefox-Tutorial Hack-Tool Manager Micromax Portable Recovery Rom Samsung-news Smartphone-article&guide Stock-ROMs USB VIVO ZenFone facebook iPod-touch ဗဟုသုတများ ဝင်းဒိုးဆိုင်ရာ APK-Patcher Adobe Android-guide Anti-Malware Bluetooth Burning-software Chat-APK Connector Custom Recovery Download-Guide Download-Manager HTML Instagram-guide Internet-news Jailbreak-Tool Lenovo Messenger PDF-Converter Reader Recorder Remove-tool Settings System-Care Telenor Tool-box X-BO iOS-Firmware iPhone-guide map video-capture-tool ကွန်ပြူတာလမ်းညွှန် မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်ကျန်မာရေး အင်တာနက် အာကာသသတင်း ပြည်တွင်းသတင်း APK-Guide Apk-Editor Cable Contacts-APK Coolpad Copy-Software Design Disk-Defrag Ebooks Edit-Software Firefox-Addon Firewall GPS-Tracker Google-Translate Hacking OS Hide-IP Honor IMEI IOS-App Image-to-PDF Internet-guide Key protecter LAVA LAVA-Keypad Lollipop Movies Nero Note PDF-Creater PSD Photo-Editor Photo-Recovery PhotoShop-tutorial PlayStore Proxy-Software QR-Scanner Registry-Cleaner Safari-guide Screen-Recorder Smart-Watch Smartwatches Songs Sound Studio Tablet Trojan-Remover Twitter-guide USB-Bootable Ubuntu-OS Unlock-Tool Virus-Remineder Virus-Remover Voice-Changer Windows-Device Wireless-Webcam XOLO featured keyboard mp3-cutter viber-Guide ကုမ္မဏီများ စက်ရုပ် စက္ကူခေါက်နည်း စစ်လက်နက်များ ဓါတ်ပုံဆိုင်ရာ နည်းပညာစာအုပ် ပညာရှင်များ ဗွီဒီယိုဂိမ်းဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓတရားတော်များ ဘာသာပြန် မိုဘိုင်းဖုန်း-ပြဿနာများ လမ်းညွှန် အခမဲ့သုံးနည်း အိုင်းဖုန်းသတင်း ဖေါက်ထွင်းမှုသတင်း မော်တော်ဆိုင်ကယ် အော့ဖ်ဖစ်ဆိုင်ရာ
ဆိုင်မွန် (နည်းပညာနှင့်ဆော့ဝဲများ). Powered by Blogger.